“Dagaalada soo noq-noqday ee Gedo waxaa sabab u ah xukuumada Kenya oo faragalin ba?an ku heysa gobolka” Kaliil, G. Gobolka Gedo. – Radio Daljir
“Dagaalada soo noq-noqday ee Gedo waxaa sabab u ah xukuumada Kenya oo faragalin ba?an ku heysa gobolka” Kaliil, G. Gobolka Gedo.
Luuq, Sept 12 – guddoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kaliil oo wareysi siiyay Radio Daljir ayaa sheegay in dagaalada soo noq-noqday ee ka taagan gobolka Gedo ay sabab u tahay xukuumada Kenya, waxaana uu eedeyntaasi u cuskadey tababaro ciidan iyo taageero ay Kenya siiso maamulka Azaaniya oo dhawaan looga dhawaaqey magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Gudoomiyaha ayaa dhanka kale ka hadley dagaalkii shalay ka dhacay degmada Ceel-waaql ee gobolka Gedo, waxaana uu shaaca ka qaaday in degmadaasi ay xilligaan gacanta ku hayaan ciidankada DKFS, isla markaana ay shalay galinkii danbe ka saareen kooxda Al-shabaab oo saacado qura gacanta kuhaysay deeggaankaasi.
Md. Kaliil ayaa beeniyay war ay baahiyeen qaar ka mida idaacadaha maxaliga ee dalka, kuwaasoo oo tilmaamaya in dagaal xooggan uu maanta dhex-maray ciidamo ka wada tirsan DFKS, khasaaraha halkaasi ka dhasheyna uu gaarayo dhimashada 5 askari iyo dhaawac kale oo badan. Balse arrintaasi ayaa gudoomiye Kaliil waxaa uu ku tilmaamey mid been abuur ah.
Maxamed Cabdi Kaliil mar uu ka hadlayay khasaarahihii dagaalkii shalay ka dhacay Ceel-waaq ayuu dhimashada askarta DFKS ku sheegey ilaa 8 askari, ayna jireen dhaawacyo kale oo soo gaarey ciidanka dawladda, balse isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ku sheegay khasaaraha dhimasho ee dhanka Al-shabaab, ilaa 40 dhimasho ah inay kala kulmeen dagaalkii shalay ka dhacay degmada Ceel-waaq ee gobolka Gedo. Sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdi kaliil.
Gudoomiyaha ayaa ugu danbayntii carabka ku dhuftay inay ka go’antahay sidii ay kooxda Al-shabaab uga cirib-tiri lahaayeen deegaannada ka tirsan Gedo ee ay gacanta ku hayaan kooxda Al-shabaab, waxaana uu xusey inuu jiro qorshe dagaal oo saraakiisha dawladdu ay dajiyeen.
Radio Daljir, Garowe.